नेपालमा लगानी गर्न वाणिज्यमन्त्रीको बेलायती लगानीकर्तालाई आग्रह
काठमाण्डौ । वाणिज्य मन्त्री दीपक बोहोराले नेपालमा लगानी गर्ने उपयुक्त समय आएको बताएका छन् । नेपाल चेम्वर अफ कमर्सद्वारा बुधबार चेम्वर भवनमा आयोजित व्यापार तथा लगानीका सम्भावना बारे छलफल कार्यक्रममा मन्त्री बोहोराले सो कुरा बताएका हुन् । नेपाल भ्रमणमा रहेका बेलायती व्यवसायीहरु सम्मिलित सो छलफल कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै...
१६२ स्थान पछि धकेलिँदै विनोद चौधरी फेरि फोब्र्सको अर्बपति सूचिमा
काठमाण्डौ । प्रत्येक वर्ष विश्वका डलर अर्बपतिहरुको र्याकिङसहितको सूचि प्रकाशन गर्दै आएको अमेरिकी म्यागजिन फोब्र्स प्रकाशन गरेको सन् २०१६ का विश्वका अर्बपतिहरुको सूचिमा नेपालका एकमात्र डलर अर्बपति विनोद चौधरीले पुनः आफ्नो स्थान सुरक्षित गरेका छन् । तर सन् २०१५ को सूचि भन्दा यो पटक उनी १६२ स्थान पछाडि धकेलिएका छन् । विश्वका...
किमाथांका–जोगवनी सडक र क्षेत्रीय विमानस्थल निर्माणका लागि विशेष बजेट विनियोजन हुने
विराटनगर । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा किमाथांका–जोगवनी सडक र क्षेत्रीय विमानस्थल निर्माणका लागि विशेष बजेट विनियोजन गर्ने भएको छ । राष्टिय योजना आयोगनका उपाध्यक्ष डा. युवराज खतिवडाले मंगलबार विराटनगरमा पूर्वाञ्चलका उद्योगी व्यवसायीको भेटमा यो विषयमा जानकारी गराएका हुन् । उनले पूर्वाधारको विकासबिना आर्थिक विकासको सपना...
सरकारले अर्थतन्त्र सुधार्न विशेष प्याकेज ल्याउने
विराटनगर । उद्योगमन्त्री सोमप्रसाद पाण्डेले भूकम्प, मधेश आन्दोलन र नाकाबन्दीका कारण थिलथिलो बनेको उद्योग र व्यापार क्षेत्रका लागि सरकारले विशेष योजना ल्याउने तयारी गरिरहेको बताएका छन् । मोरंग व्यापार संघमा पूर्वाञ्चलका उद्योगी व्यापारीसँगको भेटमा उद्योगमन्त्री पाण्डेले सो कुरा बताएका हुन् । उनले विभिन्न समस्याहरुका कारण...
कालोबजारी आरोपमा भएको धरपकडविरुद्ध खनिए एफएनसीसीआई र सिएनआई
काठमाण्डौ । प्रहरीले कालोबजारीको आरोपमा शुक्रबार नेपालकै ठूला र चर्चित दुई औषधि उद्योगका संचालक तथा व्यवस्थापकलाई पक्राउ गरेको घटनाले उद्योगी÷व्यापारीमा हलचल मच्चिएको छ । प्रहरीले ठूला उद्योगीहरुलाई नै कालोबजारी गरेको भन्दै पक्राउ गरेर कारबाही गरिछाड्ने अडान लिएपछि उद्योगी र व्यापारीबीच आतंक मच्चिएको हो । कालोबजारीविरुद्ध...
लौ चिनौं औषधिमा कालोबजारी गरी जनता ठग्ने उद्योगीहरु
काठमाण्डौ । सरकारले तोके भन्दा २५ देखि १ सय प्रतिशतसम्म मनपरी मूल्य वृद्धि गरी समस्यामा परेका सर्वसाधारणलाई ठगी गरेको र राज्यको कानूनलाई चुनौति दिई चरम कालोबजारी गरेको आरोपमा प्रहरीले शुक्रबार नेपालकै दुई चर्चित औषधि उद्योगका संचालकसहित चारजनालाई पक्राउ गरेको छ । महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाण्डौबाट खटिएको विशेष प्रहरी टोलीले...
काठमाडौं टावर सम्झौतामा २९ तले, नक्सामा भने १२ मात्रै !
काठमाडौं। सम्झौताभन्दा फरक तरिकाले नक्सा पास हुँदा राजधानीको पुरानो बसपार्क (रत्नपार्क) मा निर्माण गर्न लागिएको काठमाडौँ टावर निर्माण प्रक्रिया प्रभावित भएको छ । काठमाडौँ महानगरपालिका राजस्व महाशाखा प्रमुख महेश काफ्लेका अनुसार टावर निर्माणको योजना भूकम्पअघि नै आएको र भूकम्पपश्चात् टावर निर्माणसम्बन्धी फरक निर्णय भएकाले...
चैत्र ४ देखि पाँचौ अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार मेला, २ लाख बढीले अवलोकन गर्ने अनुमान
काठमाण्डौ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको आयोजनामा आगामी चैत्र ४ देखि ८ गतेसम्म काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार मेला २०७२ आयोजना हुने भएको छ । मेला बारे जानकारी गराउने उद्देश्यले महासंघ सचिवालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सो जानकारी दिइएको हो । महासंघको सदस्य नेपाल हस्तकला महासंघ र नेपाल जडीबूटी उत्पादक...
पोके कपडा पसलबाट चौधरी ग्रुपको साम्राज्यसम्म !
भारतबाट आएर नेपालमा व्यापार गरिरहेका मारवाडी समुदायले विसं १९९० सालमा नेपालमा भूकम्प जाँदा उद्धार, उपचार र शिविर चलाएर जुद्ध शमशेरको मन जितेका थिए । त्यसपछिको पुनर्निर्माणमा जुद्ध सडकको पहिलो लहरमा केही नयाँ पसल निर्माण भए । भूकम्पमा राम्रो काम गरेबापत पुरस्कारस्वरूप तत्कालीन प्रधानमन्त्री जुद्ध शमशेरले त्यसमध्येको एउटा पसल भुरामल...
७ सय ९६ टेलिकम कर्मचारीको भागमा ४० लाखदेखि १ करोडसम्म !
काठमाण्डौ । नेपाल टेलिकमले स्वेच्छिक अवकास योजना(भिआरएस)का लागि इच्छुक भएर निवेदन दिएका २६ जनालाई अयोग्य मानी बाँकी ७ सय ९६ लाई फागुनको पहिलो साता गोल्डेन ह्याण्डसेक नीति अन्तरगत आकर्षक रकम दिएर विदा गर्ने भएको छ । टेलिकमले केही समयअघि अयोग्य र अदक्ष अधिक कर्मचारीलाई कटौति गर्ने उद्देश्यले गोल्डेन ह्याण्डसेकसहितको भीआरएस...